Amakhowe we-Chaga (Inonotus obliquus) acebile ngama-phyto-chemical anamandla (isib. ama-polysaccharides, i-betulinic acid, i-triterpenoids), aziwa ngokufaka isandla kwezempilo nasekulweni nezifo. Sebenzisa imvamisa ephezulu ye-ultrasonic yokukhipha i-chaga kuyindlela ekhethwayo yokukhiqiza ukukhishwa kwe-chaga ephezulu kakhulu esezingeni eliphakeme kanye nesivuno.
Ama-Chaga Mushroom Extracts yi-Ultrasonics
Isizinda se-Ultrasonic kuyindlela ephumelela kakhulu yokukhipha izakhi ze-phytochemical kusuka kuma-botanicals anjengezitshalo nesikhunta.
Amakhowe e-Chaga acebile kumakhemikhali amaningana afana ne-polysaccharides, i-triterpenes, ne-polyphenols, ebhekele iningi lemiphumela yayo yokukhuthaza impilo kanye nokwelashwa. Amakhemikhali amakhulu kaChaga asebenzayo yi-polysacchardides (isb., Β-glucans, proteoglycans equkethe i-d-galactose, i-d-glucose, i-d-xylose, ne-d-mannose), i-triperpenoids (isib. I-betulin, i-betulinic acid), i-polyphenols, i-phytosterols (isib. ) phakathi kwezinye izinhlanganisela.
Isizinda se-Ultrasonic siphula kahle amaseli we-chaga mushroom futhi sikhiphe izinhlanganisela ze-intracellular (okungukuthi, ama-phytochemicals we-bioactive) ku-solvent. Isizinda se-Ultrasonic sisekelwe kumthetho osebenzayo we-acoustic cavitation. Imiphumela ye-ultrasonic / acoustic cavitation yimikhosi ephezulu yokugunda, izivunguvungu nokwehluka okukhulu kwengcindezi. Lawa mandla e-sonomechanical aphula izakhiwo zamaselula ezinjengezindonga zamakhowa ezinamakhowe, zikhuthaza ukudluliswa kwesisindo phakathi kwento ye-chaga ne-solvent futhi kuholele ekutholeni okuphezulu kakhulu kwenqubo ngaphakathi kwenqubo esheshayo. Ukwengeza, i-sonication ikhuthaza inzalo yezikhangiso ngokubulala amabhaktheriya namagciwane. Ukungasebenzi kwe-microbial nge-sonication kungumphumela wamandla abhubhisayo e-membrane yeseli, ukukhiqizwa kwama-radicals wamahhala, nokushisa okwenziwe endaweni.
Izinzuzo ze-Ultrasonic Chaga Extraction
ephumelelayo kakhulu – izithelo eziphakeme
Isinyathelo esisodwa, ukukhipha ibhodwe elilodwa
umshini we-ultrasonic I-UIP2000hdT i-chaga mushroom yezimboni (Inonotus obliquus) ukukhipha
Kungani i-Ultrasonic Chaga Extraction ilusizo kangaka?
Isizinda se-Ultrasonic sisetshenziswa emikhakheni eminingi yokukhiqizwa kokukhishwa, isb. Izitshalo zezitshalo nezemifino zokudla, izithasiselo, ezemithi, nezimonyo. Isibonelo esivelele kakhulu sokukhishwa kwe-ultrasonic ukukhishwa kwe-cannabidiol (CBD) namanye ama-compounds avela esitshalweni se-cannabis.
Njengoba isizinda se-ultrasonic kuyindlela yokukhipha engeyona eyokushisa, ama-bioactive compounds acutshungulwa ngobumnene ngamagagasi e-ultrasound ngakho-ke ukwehla okushisayo kwamakhemikhali ezitshalo azwelayo kuvinjelwe. Yonke imingcele yenqubo ye-ultrasonic, okungukuthi i-amplitude, umfutho, izinga lokushisa nengcindezi, ingalawulwa kahle. Lokhu kuvumela inqubo eqondile nokulawulwa kwekhwalithi futhi kwenza kube lula ukuphinda nokukhiqiza kabusha uma usuthole imiphumela yesizinda. Khipha abakhiqizi balinganisa i-ultrasonication ngenqubo yayo ethembekile yokuphindeka, okusiza ukulinganisa izinqubo nemikhiqizo emazingeni aphezulu.
I-Ultrasonication iyindlela yokukhipha esheshayo futhi emnene yokukhiqiza ikhowe lekhwalithi ephezulu. Kuvidiyo, i-UP400St isetshenziselwa ukukhipha amakhowe okwelapha.
I-Cold Mushroom Extraction isebenzisa i-UP400St enophenyo olungu-22mm
Ikhwalithi ephezulu, Ukukhiqiza Okuphezulu Kwe-Chaga Okukhishwe yi-Sonication
Ucwaningo luqinisekisa ukuthi ama-chaga mushroom akhiqizwa nge-ultrasonically aqukethe ama-triterpenoids amaningi kunokukhishwa okuvamile kwamanzi ashisayo. Inqubo yokukhipha i-ultrasonic ikhuthaza ukukhishwa nokuhlukaniswa kwawo wonke ama-compounds abalulekile avela kumakhowe we-chaga (I. obliquus). Isizinda esisizwa nge-ultrasonically sidlula ezinye izindlela zokukhipha ngokusebenza kahle kakhulu kanye nokutholakala kokuthuthuka kokutholakala kwama-phytochemicals we-bioactive akhiphe ikhowe. Izingcaphuno ezivela ocwaningweni lwezesayensi zikhombisa ukusebenza kahle okuphezulu nokukhipha kwesizinda se-chaga se-ultrasonic.
Isizinda sePolysaccharide esivela kuChaga
UZhang et al. kusetshenziswe isizinda esisizwe se-ultrasonic ukuthuthukisa izimo ezifanele zokukhishwa kwama-polysaccharides kusuka ku-I.obliquus, enezimo ezinhle kakhulu ezibandakanya ukusetshenziswa kwamanzi njengesixazululo semizuzu eyi-15 ku-95 ° C nge-ultrasound frequency extraction, okunikeze amanani we-extraction we-1.82%
Isizinda se-Betulin / Betulinic Acid esivela ku-Chaga
Imiphumela ikhombisa ukuthi i-ultrasound ibibambe iqhaza elibonakalayo ekukhipheni i-betulin ne-betulinic acid ngoba ingaphoqa izindonga zamaseli ukuthi zivule futhi zikhuthaze ukudluliswa okungcono kwesisindo nokushisa. Lokhu nakho kusiza ukukhipha ngempumelelo ama-phytochemicals afunekayo ngesikhathi esifushane ngokusebenza kahle okukhulu. Ukwanda okuncane kokuvunwa kokungezwa kwesinyathelo sokukhishwa kwe-solvent ngemuva kwe-ultrasonication kubonise ukuthi iningi lalezi zinhlanganisela kufanele ukuthi zikhishwe ku-biomass. Imiphumela etholakele ikhombisa inani eliphakeme le-betulin ekhishwayo ku-biomass. (I-Alhazmi, 2017) Kukonke, i-ultrasonication inyuse kakhulu i-betulin ne-betulinic acid isivuno.
I-Ultrasonicator UP400St enophondo S24D22L2 yokukhishwa kwe-chaga (Inonotus obliquus)
Iphrothokholi Yesinyathelo Ngesinyathelo
Ukuze uhlukanise okukhishwa okugcwele okugcwele okuvela kumakhowe we-chaga (Inonotus obliquus), kusetshenziswa umthetho olandelanayo wezinyathelo ezimbili usebenzisa i-power ultrasonics.
Okubalulekile: I-obliquus eyomile (100g) ichotshoziwe yaba izingcezu ezincane ze-approx. 1,3cm2 (0.5×0.5 amayintshi). Impahla yamakhowe e-chrushed ibekwa ku-1.5L glass beaker.
Isinyathelo: Isizinda se-Ultrasonic Cold: I-chaga eyomile, yomhlabathi imisiwe ku-1000 mL we-60% ethanol emanzini ahlanziwe noma acolisisiwe (v / v; 60% ethanol: 40% wamanzi) ngokungeza ingxube ye-solvent ku-glass beaker ne-chaga. Ukukhipha, kusetshenziswa i-ultrasonic extractor UP400St efakwe i-sonotrode S24d22L2D. Uphondo (sonotrode) lwe-ultrasonicator lubhajiswa ekumisweni kwamakhowe kanye ne-solvent. Ukusetshenziswa kwesidlakudla kungakhethwa, kepha kungasiza ukuhambisa izinhlayiya zezitshalo ngokufana ku-sonotrode. Qiniseka ukuthi i-sonotrode ayizithinti izindonga ze-beaker. Setha i-amplitude ibe yi-100% bese uyihlanganisa nge-approx. 10 imiz. I-UP400St iza nenzwa yokushisa engaxhuma. Xhuma i-thermocouple ne-ultrasonicator bese ufaka inzwa ekumisweni. Kumenyu yedijithali yedivayisi ye-ultrasonic UP400St, ungasetha umkhawulo wokushisa ophezulu. I-ultrasonicator izomisa isikhashana lapho lokhu kufinyelela kokushisa kufinyelelwa futhi kuqala ngokuzenzakalela ngokushesha lapho ukumiswa sekufinyelele kunani eliphansi le-set ∆T. Amanani ama-valuesT anconyiwe asondele. 30 ° C njengoba phezulu no-20 ° C njengenani eliphansi lokushisa Ukusetshenziswa kokugeza kwamanzi noma kweqhwa kusiza ukugcina izinga lokushisa ngesikhathi se-sonication liphansi. Ngemuva kwe-sonication, okuqinile kwamakhowe kususwa ngokuhlunga nangokucindezela. I-solvent enamakhemikhali e-phyto akhishiwe ibhekana nokuhwamuka komshini noma i-rotor-evaporation ukuze ekugcineni ingxenyana ye-chaga etholakala ekukhishweni kwe-ethanol. Okusalile kwe-chaga solids kungasetshenziselwa isinyathelo sokuzikhethela sesibili, isizinda esishisayo se-ultrasonic.
Isinyathelo (ngokuzithandela): Isizinda Esishisayo se-Ultrasonic: Okususelwa kokutholakele kokuqala okubuyiselwe okusetshenzisiwe kwe-chaga kusetshenziswa esinyathelweni sesibili se-ultrasonic isizinda esishisayo ukuhlukanisa ingxenyenamba yamaphytochemicals asele kumakhowe we-chaga. Izinto zefungus zifakwa kwi-glass beaker, ama-600mL we-60% ethanol entsha: isisombululo se-solvent samanzi esingu-40% siyangezwa futhi sishisiswe ukuze sifinyelele. 70 ° C. Ngesikhathi se-sonication, izinga lokushisa lingakhuphuka lifike kuma-95 ° C. Ukushisa okungeziwe kukhuthaza ukukhishwa kwama-phytochemicals asalayo. Njengoba cishe wonke amakhemikhali azwela nge-thermo akhishwe ngaphansi kwezimo ezilawulwa ngokushisa ngokweqile kusinyathelo 1, lesi sinyathelo sesibili singasetshenziswa ngokuzithandela ukudala okukhishwe okuqinile, okuphelele kuwo wonke ama-phytochemicals we-chaga mushroom. Ukumiswa kunikezwe i-UP400St ngendlela efanayo naleyo echazwe ngenhla. Hlunga, cindezela futhi uhlukanise amakhowe kokukhishwa kwamanzi. Ama-phyto-constituents akhiphe okwesibili nawo ahlukanisiwe ngomhwamuko.
Kokubili ama-chaga akhipha izingxenyana, ezivela emanzini nasenkombeni ye-ethanol, ahlanganiswe ndawonye ukuze kutholakale isamba esigcwele se-chaga mushroom. Lokhu kukhishwa kungenziwa ngemikhiqizo ehlukahlukene njengoketshezi, amaphilisi noma imikhiqizo edliwayo.
Le nqubo iqondakala ngokuphelele kunoma iyiphi enye ivolumu. Ukufaka imingcele efanayo ye-ultrasonic (umfutho we-ultrasonic Ws / L, ingcindezi, izinga lokushisa, okuqinile: ukugxila kuketshezi), yonke imiphumela esivele isunguliwe yokukhishwa kwe-chaga ye-ultrasonic ingamane ikalwe kumanani amakhulu (noma amancane) ngenkathi izuza imiphumela efanayo (okusho isivuno, inqubo yokusebenza kahle).
Isizinda se-Ultrasonic sihambisana nanoma iyiphi i-solvent. Lokhu kukuvumela ukuthi usebenzise i-solvent oyithandayo. Kwiphrothokholi yokukhipha i-chaga ngenhla sincoma isisombululo se-solvent esine-60% ethanol: 40% amanzi (v / v). Inhlanganisela ye-ethanol namanzi inika amandla ukukhipha amakhemikhali e-phytochemical of polarities ahlukahlukene. Ngenye indlela, kungasetshenziswa ukukhipha izigaba ezimbili usebenzisa i-ethanol esinyathelweni sokuqala sokukhipha namanzi esinyathelweni sesibili sokukhipha. Isizinda se-Ultrasonic sisebenzisa inhlanganisela yesinyibilikisi yotshwala namanzi ikhipha ama-phytochemicals ancibilikiswa ngamanzi nophuzo oluncola otshwala kumakhowe afana ne-chaga.
Ngakho-ke, ukukhipha kubalulekile ekwenzeni ama-mushroom amsulwa futhi anamandla.
Amanye ama-solvents asetshenziselwa ukukhishwa kwe-Inonotus obliquus yi-isopropanol, methanol, methanol equkethe i-10% acetic acid, i-ethyl acetate phakathi kokunye. Kokukhishwa kwebanga lokudla, kunconywa i-solvent engeyona enobuthi, ngoba ngemuva kokukhishwa kwe-solvent (isb. Ukuhwamuka) kwesinye isikhathi amanani wokusalela angahle ashiywe kukhishwe.
Inqubo Amapharamitha wokukhishwa kwe-Chaga ye-Ultrasonic
Amandla we-Sonication (Ws / L)
Usayizi wezinhlayiyana zempahla eluhlaza
Ingcindezi Iqinisa Isizinda se-Ultrasonic
Izikhiqizi zezimboni zeHielscher Ultrasonics zivame ukufakwa ngamakhemikhali avaliwe noma ama-inline flow-through reactors, angacindezelwa. Ukusetshenziswa kwengcindezi ephakeme kuqinisa i-acoustic cavitation eyenziwe ngamandla e-ultrasound futhi ngaleyo ndlela ibe nomthelela kwinqubo yokukhipha ngokuzuzisayo.
Ama-Ultrasonicators aphezulu asebenzayo wokukhishwa kwe-Chaga
Isizinda se-Ultrasonic ubuchwepheshe bokusebenza obunokwethenjelwa, obusiza futhi busheshise ukukhiqizwa kokukhishwa kwekhwalithi ephezulu ezintweni ezahlukahlukene eziluhlaza ezifana ne-chaga namanye amakhowe. Iphothifoliyo yeHielscher Ultrasonics ifaka uhla oluphelele kusuka kuma-compact lab ultrasonicators kuya kumasistimu wokukhipha ezimbonini. Ngaleyo ndlela, thina kwaHielscher singakunikeza i-ultrasonicator efaneleke kakhulu kunqubo yakho ebekiwe yenqubo. Abasebenzi bethu besikhathi eside abanolwazi bazokusiza ekuhlolweni okungenzeka nasekusebenziseni inqubo ekufakweni kohlelo lwakho lwe-ultrasonic ezingeni lokugcina lokukhiqiza.
Ukuphrinta okuncane konyawo kwama-extractors ethu e-ultrasonic kanye nokuguquguquka kwawo ekukhethweni kokufaka kubenza balingane ngisho nasezikhungweni ezincane zokucubungula i-pectin. Amaprosesa we-Ultrasonic afakiwe emhlabeni wonke ezindaweni zokukhiqiza zokudla, i-pharma nezomsoco.
Hielscher Ultrasonics – Isisetshenziswa Sokukhishwa Sophisticated
Iphothifoliyo yomkhiqizo we-Hielscher Ultrasonics ihlanganisa uhla oluphelele lwe-extractors ephezulu ye-ultrasonic kusuka ezincane kuya ezinkulu. Izesekeli ezingeziwe zivumela ukuhlangana okulula kokucushwa okuhle kakhulu kwedivayisi ye-ultrasonic yenqubo yakho yokukhipha i-chaga. Ukusetha okulungile kwe-ultrasonic kuya ngomthamo ocatshangelwe, ivolumu, impahla eluhlaza, inqubo ye-batch noma i-inline kanye nomugqa wesikhathi.
Iqoqwana Nokuqhubeka Kokugeleza
Ama-ultrasonicators ama-Hielscher angasetshenziselwa ukuqhutshwa nokuqhutshwa kokugeleza okuqhubekayo Ukucubungula kwe-batch ultrasonic kufanelekile ekuhlolweni kwenqubo, ukwenziwa kahle futhi kube sezingeni eliphansi lokukhiqiza likasayizi ophakathi. Ngokukhiqiza inani elikhulu lamakhowe we-chaga, ukucubungula okusemgqeni kungasiza kakhulu. Inqubo eqhubekayo yokuxuba emugqeni idinga ukusethwa okuyinkimbinkimbi – equkethe iphampu, amapayipi noma amapayipi namathangi -, kodwa isebenza kahle kakhulu, iyashesha futhi idinga abasebenzi abancane kakhulu. Zonke izinhlelo zezimboni zingaqhutshwa ngaphansi kwengcindezi ephakeme, eyandisa i-cavitation futhi ngaleyo ndlela isebenze kahle ngokukhipha. I-Hielscher Ultrasonics inokusetha okufanele kakhulu kokukhipha ivolumu yesizinda sakho nezinhloso zenqubo.
Uhla lomkhiqizo we-Hielscher Ultrasonics lumboza ububanzi obugcwele bama-processor we-ultrasonic kusuka kuma-compact lab ultrasonicators ngaphezulu kwebench-top kanye nezinhlelo zokushayela kumaprosesa asezimboni asebenza ngokugcwele anamandla wokucubungula ukulayisha amaloli ngehora. Uhla olugcwele lomkhiqizo lusivumela ukuthi sikunikeze okukhipha i-ultrasonic efaneleke kakhulu kwe-chaga yakho kanye namanye amakhowe, amandla enqubo nezinhloso zokukhiqiza.
Onke ama-ultrasonicators aseHielscher alawulwa kahle futhi ngaleyo ndlela enokwethenjelwa amahhashi omsebenzi ekukhiqizeni. I-amplitude ingenye yezinqubo ezibalulekile zenqubo ezithonya ukusebenza kahle nokusebenza kahle kwe-ultrasonic isizinda sama-phytochemicals avela ku-chaga mushroom (Inonotus obliquus).
Zonke Hielscher Ultrasonics’ amaprosesa avumela ukumiswa okuqondile kwe-amplitude. I-Sonotrodes nezimpondo ze-booster yizinsiza ezivumela ukuguqula ubukhulu endaweni ebanzi kakhulu. Amaprosesa aseHielscher ezimboni ze-ultrasonic angaletha ama-amplitudes aphakeme kakhulu futhi ahambise amandla adingekayo e-ultrasonic wezicelo ezifunwayo. Amplitudes afika ku-200µm angaqhutshwa ngokuqhubekayo ngokuqhubekayo ekusebenzeni okungama-24/7.
Amasethingi we-amplitude aqondile nokuqapha unomphela kwemingcele yenqubo ye-ultrasonic nge-smart software kukunika ithuba lokuphatha impahla yakho eluhlaza yamakhowe ngezimo ezisebenza kahle kakhulu ze-ultrasonic. I-sonication efanelekile yemiphumela emihle kakhulu yokukhipha!
Izinqubo ze-Ultrasonic zingalinganiswa ngokuphelele. Lokhu kusho ukuthi yonke imiphumela oyizuzile usebenzisa ilebhu noma ibhentshi-phezulu i-ultrasonicator, ingakalwa ngokukhishwa okufanayo kusetshenziswa amapharamitha wenqubo efanayo. Lokhu kwenza i-ultrasonication ilungele ukuhlolwa okungenakho ubungozi, ukwenziwa kwenqubo nokwenza okulandelayo kokukhiqizwa kwezentengiso. Xhumana nathi ukuze ufunde ukuthi i-sonication ingakhulisa kanjani ukukhiqizwa kwakho kwe-chaga.
Njengebhizinisi eliphethwe ngumndeni neliphethwe ngumndeni, i-Hielscher ibeka phambili amazinga aphezulu ekhwalithi yamaprosesa ayo e-ultrasonic. Onke ama-ultrasonicators aklanyelwe, akhiqizwa futhi ahlolwa kahle ekomkhulu lethu lasekhaya eTeltow ngaseBerlin, eJalimane. Ukuqina nokuthembeka kwemishini ye-ultrasonic ye-Hielscher kuyenza ihhashi lomsebenzi ekukhiqizeni kwakho. Ukusebenza kwe-24/7 ngaphansi kokulayishwa okugcwele futhi ezindaweni ezifuna kakhulu kuyisici semvelo sabakhiphi abasebenza ngokusebenza okuphezulu kwe-Hielscher.
Izincwadi / Izinkomba, Izikweletu
Isizinda se-Artemisinin esisebenza kahle kakhulu nge-Sonication
I-Inonotus obliquus, eyaziwa nangokuthi i-chaga mushroom, iyi-mushroom ye-Polyporus eyisimungulu. Njengesikhunta eselaphayo se-basidiomycetes, i-chaga ihlukaniswa emndenini weHymenochaetaceae, ukuhleleka kweHymenochaetales, kanye nesigaba se-Agaricomycetes, ngokulandelana. IChaga ayikwazi ukumelana namakhaza kakhulu, kanti i-mycelium yayo ikhula ehlathini elibekezelela amazinga okushisa aphansi afike ku -40 ° C. I-chaga fungus ithelela izihlahla zokhuni oluqinile futhi itholakala kakhulu ikhula emibhaka, futhi, kancane, ezihlahleni ezivela kuhlobo lweQuercus (oki), Populus (poplars), Alnus (alders), Fagus (umlotha), ne-Acer (maples) . Ngokuvamile itholakala ebangeni elingama-45-50 ° futhi ingatholakala kabanzi eNyakatho Yurophu, eCanada, ePoland, eRussia, esifundeni saseHokkaido eJapan, kanye nasesifundazweni saseHeilongjiang nasentabeni yaseChangbai eChina. I-Chaga (I. obliquus) ihehe ukunakwa okwandayo ocwaningweni lwezomsoco nokwelapha ngenxa yama-phytochemicals ayo asebenza kahle kakhulu, aziwa ngokuhlinzeka ngemiphumela yokulwa nesimila, i-antioxidative, i-immunomodulatory, ne-anti-asthmatic, kanye nezinye izinzuzo zokwelapha. Ucwaningo oluningi lukhombisile ukuthi ama-polysaccharides wamakhowe we-chaga angenye yezakhi ezinkulu ze-bioactive ezinikeza amakhowe e-Inonotus obliquus izindawo zawo eziwusizo ezikhuthaza impilo.